Ọrụ Digital Media na Marketing | Martech Zone
Saturday, December 28, 2013 Monday, December 30, 2013 Douglas Karr
Ka mgbasa ozi na-aga na dijitalụ, ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ iji gbakọọ oke kachasị nke mmefu ego ha. Ọ bụghị nanị iru ihe ha zubere, ọ ga-eritekwa uru nke onye ọ bụla na-ajụ iji ghọta n'ụzọ zuru ezu ahịa ahịa. Ihe omuma ihe omuma a na egosiputa ihe omuma data dika usoro ndi ahia jiri nweta ya nri.
Mgbasa ozi dijitalụ na-aghọ ngwa ngwa na ndị ahịa. Site na 2017, mgbasa ozi dijitalụ na-eme atụmatụ ịbụ ihe ruru $ 171 Billion, na-akpata ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ anọ nke mgbasa ozi zuru ụwa ọnụ. Nke a na - anọchite anya mmụba 70% site na ọkwa ugbu a. Na United States, mgbasa ozi etinye na overtntanetị gafere mgbasa ozi niile ma e wezụga igwe onyonyo na 2011.
Capgemini Consulting ewepụtala akwụkwọ ntanetị na nsonaazụ zuru ezu, Ọrụ Digital na Media Mix: Mixghọta Digital Marketing na it nweta ya nke ọma.
Tags: okpucapgemini na-agba izudigital marketingdijitalụ ahịa mixmgbasa ozi dijitalụmgbasa ozi mixOmenala ahiaọdịnala ọdịnala
25 Awesome Content Marketing Ngwaọrụ